Kedu ngwá ọrụ ngwaọrụ nwere ike ịkwado Ọdịchọ Mmasị Amazon Amazon kacha mma?
Tupu ihe ọ bụla ọzọ, ihe kachasị sie ike na Amazon bụ na ị ga-aghọta mkpa, ọchịchọ, na ebumnuche nke ndị ahịa gị nwere ike ịghọ ndị na-azụ ahịa n'ezie na-eme ka ị zụrụ azụ na onye ọzọ. Ma ọ bụghị ọrụ dị mfe ọ bụla, ọ bụ n'ihi na onye ọ bụla na-ere ahịa n'Ịntanet na ọbụna onye na-ere ahịa n'oge ọ bụla na Amazon nwere ihe dị ukwuu na-eme na ọtụtụ nsogbu nke dị mkpa ugbu a ka a ga-ebute ya ụzọ. Ma, ọ nwere obi ụtọ na e nwere ọtụtụ ngwá ọrụ dị mma n'ahịa iji nyere gị aka na Amazon Search Engine Optimization.
Ma tupu igosi gị otu ụdị ngwá ọrụ ndị m nwere na ebe nrụọrụ weebụ na-enyere aka, ka anyị chee ya ihu - Amazon Optimization Search Engine na-emekarị ka ọ gbanwee isi okwu ndị dị na ya, nakwa dị ka ebe ntinye ha kwesịrị ekwesị site na isi ngalaba nke ndepụta ngwaahịa gị. Nke a bụ ihe dị n'okpuru ebe m ga-elekwasị anya na Amazon Search Engine Optimization for keywords and long-tail search phrases, backed with a couple of pretty good tools to make things much easier (ọ dịkarịa ala ndị metụtara na-omimi asọmpi keyword nchọpụta - ọ dị mma, a ga-edozi ya naanị ma dị jụụ - ọ bụ ezie na enyere gị aka na onye inyeaka na-enyere gị aka n'ịntanetị) - cctv installations london.
1. Okwu ndị ahịa - bụ otu ngwá ọrụ Amazon Search Engine Optimization kachasị ewu ewu, karịsịa mgbe ọ na-abịa na njedebe isiokwu mkpado nke a na-atụ anya na asọmpi ma na-emeri ogologo oge search njikọ. Ma ọ dị mfe ịmepụta tọn nke mkpụrụokwu mkpirisi okwu dị iche iche na ngwaahịa gị ngwaahịa ma ọ bụ ihe onye ọ bụla ị nwere ire ere n'ebe ahụ. Ọ pụtara na Okwu Ndị ahịa nwere ike ịghọ ezigbo ngwọta maka ndị na-ere ahịa novice bụ ndị kwesịrị ịmalite mmalite na Amazon Search Engine Optimization for keywords right.
2. Keyword Dominator - bụ ezigbo ngwá ọrụ ị ga-eji mee ihe n'ime atụmatụ gị niile na Amazon Search Engine Optimization. Ọ bụ ezie na a na-ebubo ndụ niile ịnweta ụdị ngwá ọrụ a maka ihe dị ka dollar 50, ihe karịrị puku mmadụ iri na ise nke ndị na-eguzogide eguzobeworị nkwenye dị iche iche nke uru ndị pụrụ iche. N'etiti ndị ọzọ, isiokwu Dominator toolkit nwere atọ dị iche iche inbuilt ngwaọrụ nke nwere ike ijere gị na ụzọ ha. Naanị ịnwale ya na Google Keywordcomplete Keyword Tool (uwe free na-ahaziri iji chọpụta ihe niile nwere ike ịmepụta mkpokọta njikọ dị na ahịa gị / nchịkọta ngwaahịa - wepụtara kpọmkwem site na SERPs Google), YouTube Keyword Tool (na-enye ezigbo uru ogologo-tail aro Keywords nke ahụ ga-enye aka dị ukwuu maka ndị ahịa ahụ na-ebibi profaịlụ na-akwado ma ọ bụ ọwa ahịa na ebe nrụọrụ weebụ nke abụọ a na-eleta), yana Amazon Tool Tool (na-enye gị ohere kpọmkwem na nchekwa data dị mkpirikpi nke na-ekpuchi ọtụtụ nde ọchụchọ ọchụchọ dị na ọchụchọ nke ndị na - ere ahịa na - ere ahịa na - azụta ego kwa ụbọchị na Amazon ahịa).